Seranam-piaramanidina Moskoa Domodedovo voalohany ao Russia hiditra amin'ny fanoloran-tena NetZero2050
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seranam-piaramanidina Moskoa Domodedovo voalohany ao Russia hiditra amin'ny fanoloran-tena NetZero2050
Ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo no lasa seranam-piaramanidina rosiana voalohany nanao sonia ny vahaolana noraisin'ny 'NetZero2050' nandritra ny fivoriambe faha-29 an'ny ACI EUROPE. Miompana amin'ny fiovan'ny toetrandro manerantany ny hetsika.
Ao anatin'ny rafitra misy ny vahaolana 'NetZero2050', seranam-piaramanidina 194 misolo tena firenena 24 manerana an'izao tontolo izao no nanolo-tena hahatratra ny famoahana karbaona aotra net hatramin'ny 2050. Ity tetik'asa ity dia hitarika fihenan'ny emissions CO2 3.46 tapitrisa taonina isan-taona amin'ny 2050, raha jerena ny fivezivezin'ny seranam-piaramanidina eropeana ankehitriny boky sy ny tombam-bidin'ny karbaona tombanana.
Dr Michael Kerkloh, filohan'ny ACI EUROPE sady tale jeneralin'ny seranam-piaramanidina Munich dia nanambara fa “ny seranam-piaramanidina eropeana dia nitarika hetsika tamin'ny toetrandro tamin'ny fihenan'ny isan-taona isan-taona tao anatin'ny folo taona lasa *. 43 amin'izy ireo no tena lasa tsy mitongilana karbaona, tohanan'ny fenitra manerantany momba ny seranam-piaramanidina Carbon Accreditation. Na izany aza, ny fanoloran-tena anio dia mitondra refy vaovao amin'io - tsy misy offset. Zava-dehibe, miaraka amin'ny fanoloran-tenany NetZero2050, ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia mampifanaraka ny tenany amin'ny fifanarahana Paris sy ny tanjona vaovao momba ny toetr'andro izay noraisin'ny UE tamin'ny herinandro lasa teo. ”
Ny habaky ny rivotra dia efa nametraka fepetra maro mikendry ny fampidirana ireo haitao maitso amin'ny asany.
Ohatra, ny serivisy seranam-piaramanidina DME dia mampiasa tohatra fiakarana mpandeha miisa 32 mandeha amin'ny herinaratra. Domodedovo dia niova tamin'ny jiro LED tao amin'ny tranoben'ny terminal, mampihena 70% ny fanjifana angovo ary soloina jiro misy Mercury.
Ny seranam-piaramanidina dia mandray anjara amina hetsika ara-tontolo iainana matetika ao anatin'izany ny 'The Forest of Victory' sy ny 'The Earth Hour hetsika'.
Grand Hyatt Nashville nanendry mpitantana jeneraly vaovao
Lehilahy mpiasan'ny fiaramanidina filoham-pirenena breziliana voasambotra tany Espana niaraka tamin'ny kokain '86 pounds '